Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaado Kasocda Gobolka Shucuubta Konfureed ee Gumaysiga Itoobiya.
Mudaaharaado Kasocda Gobolka Shucuubta Konfureed ee Gumaysiga Itoobiya.
Posted by Wariye Qaran	/ June 14, 2018
Wararka hada nasoo gaadhaya Itoobiya ayaa sheegaya inay sii xoogaysteen mudaharaadadii iyo rabshadihii lagaga soo horjeeday taliska Gumaysiga Itoobiya waxaa gobolka Shucuubta Koonfureed oo dhaca koonfurta Itoobiya mudo isbuuca ah si isdabajooga uga socda mudaharaado rabshado wata oo aan horay looga baran.
Dadka shacabka ah ee mudaharaadaya ayaa dalbana xuquuqda aas aasiga ah iyo xoriyada gobolkan oo ah meeshuu kasoo jeeday rayswasaarihii magac uyaaalka ahaa ee xilka laga fadhiisiyay ayaa waxuu kamid yahay afarta urur ee ku midoobay kooxda macangaga ah ee EPRDF.
Wuxuuna noqonayaa gobalkii ugu danbeeyay ee laga mudaharaado ayadoo horay rabshado waawayn uga dheceen gobolada kale ee ku hoos dulman Gumaysiga Itoobiya. Mudaharaadadan hada ka socda gobolka Shucuubta koonfureed gaar ahaan Magaalooyinka Hawasa iyo Walkite ayaa waxaa kadhashay dhimasho, dhaawac iyo khasaare hantiyeed oo aad u badan
Taliska Wayaanaha oo ku caanbaxay cabudhinta, dilka cidkastoo madaxa kor uqaada ayaa ciidamo badan kudaad guraynaya meelaha kacdoonku ku badan yahay.
Dhinacakale waxay mudahaarado kan lamid ah kasocdaan Ogadeeniya, Oramada, Amharada iyo waliba gobolka Tigrayga oo kacabanaya wareejinta Badame oo wayaanuhu horay uga qabsaday wadanka Eritrea. Guud ahaanba xaalada gumaystaha Itoobiya ayaa maraysa meel aad uxun waxaana gabi ahaanba socda dagaalo u dhexeeya Qawmiyadaha kala duwan ee dalka.
Xeeldheerayaasha siyaasada ayaa sadaalinaya inaan nidaamka Gumaysiga Itoobiya sinaba uga bad baadaynin burbur iyo isdhaxyaac aan dhamaadkiisa la saadaalin karin meesha uu ku dambaynayo.